Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica Vakasuwa Zvakanyanya Netsaona yeTrelawny
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Jamaica Kupwanya Nhau » Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica Vakasuwa Zvakanyanya Netsaona yeTrelawny
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Jamaica Gurukota Rezvekushanya Bartlett
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica Hon. VaEdmund Bartlett varatidza kushushikana zvikuru netsaona yakaitika nezuro kuTrelawny, iyo yakauraya munhu mumwe chete ndokukuvadza vamwe vakawanda.
Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika reJamaica vapa nyaradzo kumhuri neshamwari dzemushakabvu mutsaona yebhazi revashanyi.
Vanoshuvirawo kuti vashanyi vose vakapona mutsaona iyi apore nekuchimbidza.
Vashanyi vashanu vakaendeswa kuFalmouth Hosptial kuti vanorapwa, zvisinei, mutyairi webhazi rekushanyira akakundwa nekukuvara kwake.
“Ndiri kurwadziwa zvikuru kunzwa nezvetsaona iyi uye ndinodemba kurasikirwa neupenyu uye kukuvara kwakawanda. Izvi zvinosiririsa uye, pachinzvimbo che Ministry of Tourism nemasangano ayo ehurumende, ndinopa nyaradzo kumhuri dzavo neshamwari dzevafi uye nekukasika kupora kwevakakuvara,” vakadaro Minister Bartlett.
Nezuro bhazi raitakura vashanyi kuhotera rakabondera neimwe mota mumugwagwa weDuncans Main muTrelawny. Vashanu veAmerica nezvizvarwa zviviri zvekuCuba vakaendeswa kuchipatara cheFalmouth kunorapwa. Mutyairi weimwe motokari akafira mukukuvara kwake.
The Jamaica Yevashanyi Bhodhi atanga maprotocol anodiwa uye ari kutaurirana nehama nevakuru vakakodzera.